Caruur ka Soo Baxsatay Al-Shabaab oo isku Soo Dhiibay Dowlada Soomaaliya *Dhageyso* – Balcad.com Teyteyleey
Maamulka degmada Cadale ee Gobolka Shabeellaah dhexe ayaa waxa ay sheegeen in deegaankaas ay soo gaareen caruur aad u da’yar kuwaas oo ka soo cararay deegaanada ay maamulaan Al-Shabaab.
Muuse Maxamed Kaliil Gudoomiyaha Degmada Cadale ee Maamulka Hir-Shabeelle oo Warbaahinta kula hadlayay degmaadaas ayaa sheegay in ay hayaan Caruur gaareysa ilaa 200,kuwaas oo ka soo cararay ilaa 5 Tuulo o hoostagta degamda Cadale.
Sidoo kale waxa uu hadalkiisa intaas ku daray in uu ugu baaqayo Hay’addaha deeqaha bixiya Maamulka Hir-Shabeelle iyo talisyada Ciidamada Meleteriga iyo Booliiska Soomaaliya in ay qaadaan talaabo lagu badbaadinayo caruurtaan.
Deegaano badan oo ka mid ah Gobolada dalka Soomaaliya gaar ahaan deegaanada ay Maamulaan Al-Shabaab ayaa waxaa dhacda mararka qaar in ay Caruur farabadan ay u tababaraan sidii ay uga barbar dagaalami lahaayeen.
The post Caruur ka Soo Baxsatay Al-Shabaab oo isku Soo Dhiibay Dowlada Soomaaliya *Dhageyso* appeared first on Ilwareed Online.
Maxaa Sababay inay Dad Badani Ka Cararaan Magaalada Nairob